विश्वमा यस्ता महिलाहरु पनि छन् जो कुनै पनि हद पार गर्न पछि पर्दैनन् । यसमा यस्ता महिलाहरु पनि छन् जसले आफ्नो पतिको हत्या गरेका छन् ।यहाँ विश्वभरका यस्ता ५ महिलाको चर्चा गरिएको छ । जसमा कसैले आफ्नो पतिको हत्या गरेर गाडिन् भने कसैले मासुसमेत खाइन् । १. रजनी नारायण : पतिको यौनाङ्गमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाइदिइन् सन् २००८ को डिसेम्बरमा …
यसकारण २५ बर्षको उमेरमा काजोलले गरेकी थिईन् अजय देवगनसँग बिवाह
‘बाजिगर’, ‘प्यार किया तो डरना क्या’, ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ जस्ता सुपरहिट फिल्मकी नायिका आज ४३ बर्षकी भएकी छिन् । ५ अगस्ट १९७४ मा जन्मिएकी काजोलले १९९९ मा अजय देवगनसँग बिवाह गरेकी हुन् ।त्यो बेलामा काजोलको उमेर २५ बर्षको मात्र थियो र उनको करिअर पनि भर्खर उकालो लाग्ने क्रममै थियो । यस्तो अवस्थामा उनले बिवाहको फैसला किन लिईन् ? यसको …
सुपरस्टार आमिर खानकि सुन्दर छोरी इराको हट तस्बिर बन्यो सोशल मिडियामा भाइरल
बलिउडका चर्चित अभिनेता अमिर खानकि पुत्री इरा खानको जन्म 1997 मा भारतको मुम्बईमा भएको थियो। इरा आमिरकि प्यारी छोरि हुन् । उनी सानै छदा उनका बाबा आमाले डिभोर्स गरेर अलग भएका थिए । आमीर पुत्री इरा भन्नाले सतर्क भन्ने बुझिन्छ । इरा सुन्दरी साथै एकदमै होनहार व्यक्तित्व भएकी छोरी हुन् । धेरै वलिउड स्टारका बच्चाहरु बलिउड मा आफ्नो यात्रा शुरू …
सुन भेट्टाउनु वा हराउनु शुभ कि अशुभ ? जानि राखौँ सुनसँग जोडिएका १३ रोचक कुरा !
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार प्रत्येक धातुले हामीमाथि प्रभाव पार्ने गर्दछ किनभने यो सबै सौर्यमण्डलमा रहेका ग्रहको खेल हो । हरेक धातुको एक विशेष ग्रहसँग सम्बन्ध हुन्छ । यी ग्रहले ती धातुलाई आफू अनुसार प्रभावित गर्ने गर्दछ ।तामा, चाँदी, सुन वा महँगा रत्न वा हिराले बनेको आभुषण, यी सबै कुराले कि त हामीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ वा यसले हामीमाथि नकारात्मक असर …
ललितपुरकाे टिकाथलीमा केही दिन अघिदेखी एउटा घरमा भुत या प्रेतअात्माले तर्साउदै अाएकाे भनि सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेकाे छ । विभिन्न मानिसहरूले यस घरकाे बारेमा नानाथरी धारणा व्यक्त गर्दै अाइरहेका छन । टिकाथलीमा रहेकाे अन्जना उपाध्यायको घरमा गत एकमहिना देखि भूत प्रेतकाे त्रास सिर्जना गरीरहेकाे भन्दै उनको परिवार र त्यहाँ वरपरका स्थानियवासी त्रसित छन । तर वास्तविक रूपमा उक्त घरमा के …
महिलाको पेटबाट निकालियो यस्तो अपत्यारिलो चिज डाक्टर पनि भए आश्चर्यचकित
एकजना महिलाको पेटबाट कल्पना नै गर्न नसकिने चिजहरु निकालिएको छ । ४३ वर्षकी एक महिलालाई तल्लो पेट सहनै नसक्ने गरी दुखेपछि उनी अस्पतालमा भर्ना भइन् । अस्पतालमा डाक्टरहरुले जाँच गरी हेर्दा उनको पेटमा विभिन्न किसीमका सामानहरु देखियो । त्यसपछि यसको असर दिमागसम्म पर्न नदिनको लागि डाक्टरहरुले छिट्टै शल्यक्रिया गर्ने निर्णय गरे । यसपछि उक्त महिलाको अपरेशन गरियो । अपरेशन पछि …
मात्र एउटा आलुको प्रयोग गरी छालालाई गोरो र सुन्दर बनाउने तरिका यस्तो छ जान्नुहोस् (भिडियो)
आलुमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन सी पाईन्छ । जस्को प्रयोग तपाईंले कालो छालालाई गोरो बनाउनको लागि गर्न सक्नुहुन्छ । आलुको मद्धतबाट प्राकृतिक रुपमै तपाईंले आफ्नो छालालाई सुन्दर र आर्कषक बनाउन सक्नुहुन्छ । यसको लागि तलको भिडियो हेर्नुहोस् >>>
एकजना गोर्खा सैनिक बेलायती सेनाको उच्च तहमा पुग्न सफल भएका छन् । ५० वर्षीय टोल खाम्चा मगर गत बिहीबार लेफिटनेन्ट कर्णेल पदमा पदोन्नति भएका हुन् । उक्त पद बेलायती सेनाको छैटौं वरीयतामा छ । १ फेब्रुअरीमा अल्डरसटस्थित रिजनल कमाण्ड हेडक्वार्टरमा औपचारिक घोषणापछि खाम्चालाई अहिले बधाइ ग्रहण गर्दैमा भ्याइ नभ्याइ छ। ‘भाग्य, खुबी, मिहिनेत र कामप्रति इमान्दार नै मेरो सफलताको कारण …
नेपालका लागि गौरवको कुरा: पहिलोपटक बेलायती सेनाको उच्च तहमा पुगे नेपाली
मेलबर्न । जीवनमा सफलता हासिल गर्न चाहने व्यक्तिले संसारको जुनसुकै कुनामा गएतापनि संघर्ष गर्नैपर्छ। अष्ट्रेलियामा आउने कैयौं नेपालीहरुले यस्तै संघर्ष गरेर आफ्नो जीवनमा करियरको राम्रो बाटो बनाइरहेका छन् । हाल अष्ट्रेलियामा सेनामा आफ्नो करियर बनाउन व्यस्त रहनुभएका सोम तामाङ्ग यस्तै व्यक्तिहरुमध्ये एक हुनुहुन्छ ।नेपालको चितवन घर भएका सोम सन् २००८ मा विद्यार्थी भिसामा अष्ट्रेलिया आउनुभएको हो। अष्ट्रेलिया आएर कुकरी पढ्न …
कलाकारहरू विभिन्न कारणले सधैँ गसिपमा आइरहने गर्दछन् । कहिले राम्रो त कहिले नरामो गसिपको सिकार सधैँ सेलिब्रेटी रहने गर्दछन् । विश्वभरका नै चर्चित महिला सेलिब्रेटी सेक्स काण्डमा मुछिने गर्दछन् । नेपालका पनि केही महिला सेलिब्रेटी सेक्स काण्डमा मुछिएका छन् । ती मध्ये केही अझै आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय छन् भने कहिले आत्महत्या गरेका छन् ।पूर्व मिस नेपाल जेनिशा मोक्तानको भिडियो भनेर …